Chọpụta usoro kachasị mma iji bulie ntutu gị | Bezzia
Susana Garcia | 10/06/2021 20:00 | Mma, Mma aghụghọ
Ọtụtụ mgbe anyị anyị na-egbutu ntutu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ tolite iji nwee ntutu mara mma ọzọ. Ọ bụ ezie na n'oge a, a na-eyi ọtụtụ ntutu na midi na mkpụmkpụ mkpụmkpụ, enwere ọtụtụ ndị chọrọ ka ntutu ha tolite iji nwee ogologo amamịghe. Ya mere, anyị ga-ahụ ụfọdụ aghụghọ ka ntutu a wee nwee ike ito ngwa ngwa ma si otu a nwetaghachi ogologo ntutu iji mee ntutu dị mma.
E nwere ụfọdụ aghụghọ na-eto eto ntutu, ọ bụ ezie na anyị ga-eburu n’uche na ntutu nwere ogologo nke etinyere na mkpụrụ ndụ ihe nketa yana kwa ogo uto ntutu na-adaberekwa n’onye ọ bụla. Mana n'ime ihe ndị a, anyị nwere ike ime ka ntutu too nke ọma yana ọbụladị nyere ya aka itolite ihe ọsịsọ ma sie ike.
1 Atụla anya ọrụ ebube
2 Kpachara anya mgbe ị na-asa ya
3 Jiri rosemary
4 Were mmeju
Atụla anya ọrụ ebube
Ihe mbu ị kwesịrị ịmara bụ na i kwesịghị ịtụ anya ọrụ ebube,, ebe ọ bụ na n’ozuzu mmadụ ọ bụla ntutu na-eto eto ma na-eto ihe dị ka otu centimita kwa ọnwa. Mana n'ime nke a, anyị nwere ike inyere ntutu aka oge niile ito eto ngwa ngwa ma nwekwa ike karịa. Ọ dị mkpa ka ị ghara inwe oke olile anya na ị ga-eji aka na obere oge. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe omume ma chọọ igosi ntutu isi, anyị nwere ike ịgakwuru nnukwu ndọtị oge niile.
Kpachara anya mgbe ị na-asa ya
Issacha bụ omume nke anyi kwesiri inye ya mkpa. Sacha ntutu dị mkpa ka ọ na-eto eto ka a na-ewepụsị unyi n’isi, mana ịsacha ya nwere ike imebi ya ma mebie isi ahụ, ọbụnakwa mee ka ọ daa ma ọ bụ daa, nke ga-eme ka ọ dị mkpụmkpụ ma nwekwa ahụike. Should kwesịrị ịsa ya na ncha ntutu kwesịrị ekwesị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ncha ntutu nke na-ewepụghị mmanụ dị na ntutu gị ma ghara itinye silicone ma ọ bụ parabens na usoro ahụ. Saa ntutu nke ọma na mpaghara nke isi, hapụ ncha ka ọ na-asọba na nsọtụ ma na-enweghị nsị.
El conditioner na nkpuchi dị mkpa iji mee ka ntutu dị nro ma lekọta ngwụcha, nke na-akpọnwụ karịa. Ekwesịrị iji ihe eji arụ ọrụ kwa ụbọchị ka anyị na-asa ntutu anyị, mana a na-eji nkpuchi naanị oge ụfọdụ. Ngwaahịa ndị a na-enyere anyị aka ilekọta ngwụcha ma gbochie ha imebi na imebi, na-eme ka ntutu ghara ịhapụ akụkụ nke ogologo ya na usoro ahụ.
Rosemary bụ ngwaahịa na-enyere ntutu aka ito nke ọma n’ihi na ọ na - enyere aka mee ka mgbasa dị n’isi. Ọ bụrụ na mgbasa ahụ dị mma, na-agba ntutu na-eme ka ntutu too nke ọma. E nwere ụfọdụ ngwaahịa nwere rosemary mana n'ọnọdụ ọ bụla ị nwere ike itinye infusion na osisi ahụ ma jiri mmiri ahụ mee ka ị ta ahụ. Ikwesiri ime ya otutu oge n’izu ka ichoputa ihe oma. Na mgbakwunye, nke a na-enyere ntutu aka ịdalata n'oge dị ka mgbụsị akwụkwọ. Nke a ga - enyere aka mee ka mgbasa gbasawanye ma mee ka ntutu too ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ntutu gị adịghị eto eto ọ nwere ike ịbụ mgbe niile n'ihi na ị nweghị nri. Ihe Mgbakwunye ntutu nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka na oge N'ime ya ọ dara kamakwa mgbe ọ na-eto, n'ihi na ọ bụrụ na anyị ewere ha ọ na-akawanye ike, ebe ọ nwere nri ndị dị mkpa. Enwere ọtụtụ ihe mgbakwunye mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile nwere nri ndị dị ka zinc, vitamin B, iron ma ọ bụ biotin, ebe ha niile na - enyere aka mepụta ntutu na uto ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Aghụghọ na-eto eto ntutu
Otu esi ewepu pịmpụl na azụ